Koety: Malahelo an’i Shaikh Saad · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Oktobra 2018 5:16 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, عربي, Shqip, English
Maty androany tamin'ny faha-78 taonany i Shaikh Saad Al Abdulla Al Sabah, ilay mpitondra fahiny an'i Koety rehefa narary nandritra ny fotoana ela. Tohina tamin'ireo vaovao ny vondrom-piarahamonina an-tambajotra tao Koety, ka hafatra fangorahana sy fitsapana alahelo aman-jatony no niraradraraka nameno ireo blaogy amin'ny teny Arabo sy Anglisy. Nanambara telo andro ofisiaily hisaonana ny firenena – fa handeha araka ny efa voalahatra hanaovana azy ihany ny fifidianana parlemantera izay hotontosaina amin'ny Sabotsy.
Manoratra izao lahateny fiderana manaraka izao i Saba [Ar]:
Tohina izahay tamin'ny fahafatesan'ny olona goavana iray teto Koety izay nanao sorona ny ainy ary nandany izany mba hiarovana ny fireneny. Olona lehibe teo amin'ny tantara ankehitrin'i Koety izy, hampandry am-piadanana ny fanahiny anie Allah. Mpitarika tsara izy, nahavita zavatra goavana izay fantatry ny rehetra nandritra ny asany sy ny fitantanany ofisialy teto amin'ity firenena malalantsika ity.
Resin'ny fihetsehampo ihany koa i Mr Chocolate [Ar] ary manoratra:
Andrin-kery ho an'ny rahalahinao mandrakariva ianao, ilay Emiran'ny Fo, i Shaikh Jaber Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, hampandry ny fanahiny am-piadanana anie Allah. Ray ho an'ny vahoakan'i Koety ianao. Tsy ho adinonay mandrakizay ireo ezaka nataonao tamin'ny fanafahana an'i Koety ary tsy ho adinonay mandrakizay fa zanaky ny rain'ny lalàm-panorenan'i Koety, i Shaikh Abdulla Al Salem Al Saba ianao. Mety ho mpitondra nandritra ny andro vitsy monja ianao, fa tsy ho adinonay mandrakizay ny fijalianao nateraky ny aretina. Hangoraka an'ireo olona rehetra feno finoana azy ao Koety anie Allah.
Irian'i Al Tariq ny vahoaka tao Koety tsy ho osa manoloana ity loza ity. Manoratra izy:
Mivavaka ho an'ny famindrampo sy famelankeloka ho azy aho ary mba tsy ho osa amin'ny fiatrehana ity loza ity anie ny fianakaviany sy ireo vahoaka ao Koety hiatrehana ny fahoriana.
Mamoaka ity sary manaraka ity ny 5-q8 , izay milaza hoe: Veloma, ry Rain'i Fahad, Zanaka lahimatoan'i Shaikh Saad.
Nanambara ny Blkalfasih [Ar] fa hatao ny Sabotsy 17 May 2008 ny fifidianana, ary nampiany hoe nambara tao amin'ny firenena ny telo andro fisaonana – Alarobia, Alakamisy ary Zoma.